တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အချိုး၊ အကွေ့၊ အရွေ့နှင့်လားရာ – Federal Journal
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အချိုး၊ အကွေ့၊ အရွေ့နှင့်လားရာ
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ စတင်သည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်များကို ပြန် ပြောင်းစောင်းငဲ့ကြည့်လျှင် ပါတီကြီးနှစ်ခုဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့သည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တစ်လှည့်စီ အောင်ပွဲခံကြကြောင်း သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများမှာ အောင်ပွဲ ဆင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြပါ။ အထိုက်အလျောက် အနိုင်ရရှိခဲ့သော ရခိုင်နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများသည်လည်း အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည်အထိ လောက်လောက်လားလား အောင်မြင်မှု မရခဲ့ကြပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အဆင့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစု အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း ပြည် နယ်အစိုးရ (ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်) ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခွင့် မရခဲ့ပါ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် NLD ပါတီက အမတ် အများစုအနိုင်ရခဲ့သဖြင့် NLD ပါတီမှ နိုင်ငံ တော်သမ္မတ ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ဥပဒေအရ သမ္မတ သည် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်များကို ခန့်အပ်ခွင့်ရှိရာ ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်းတိုင်းရင်း သားပါတီများက အမတ် အများစု အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း ပြည်နယ်အစိုးရ (ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်) ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခွင့် မရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် အချိန်များစွာ မကျန်တော့ပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နိုင်ငံရေး လေ့လာသူ၊ တတ်သိပညာရှင်များ အပါအဝင် ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးက ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ၏ ဖြစ်နိုင် ဖွယ်ရာက အဖြေများကို အမျိုးမျိုး သုံးသပ်ဝေဖန် ခန့်မှန်းမှုတွေ ပေးနေကြပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေး ကောက်ပွဲတွင် မရှုမလှ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပြန်လာနိုင်ဦးမလား တွေးကြည့်ကြသည်။ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ် ရေးပါတီ (တစည) ၏ လားရာကို လေ့လာသုံးသပ် ကြည့်ပါက ပြန်လာနိုင်ရန် သိပ်မမြင်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကာလတစ်လျှောက်လုံး ပြည်သူတွေ ခါးစည်းခံခဲ့ရ သည့် အဖြစ်သနစ်များကို ပြည်သူတွေ မေ့နိုင်ကြဦးမည် မထင်၊ မမေ့နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း အငြိမ်းစား တပ်မ တော်သား အများစုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကို လုံးလုံးလျားလျားနီးပါး ဥပက္ခာပြုခဲ့ပြီး NLD ပါတီကို သောင်ပြိုကမ်းပြို မဲပေးခဲ့ကြခြင်းက သက်သေ ပင်ဖြစ်သည်။ စစ်သားဆိုသည် ပင်စင်မစားသေးသူ ရော၊ အငြိမ်းစားပြီးသူများကိုပါ အားလုံးရောပြီး ပြည်သူတွေက ကြောက်ရွံ့ရှောင်ဖယ်နေကြသည့်သဘော တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ရန်ပုံငွေ တောင့်တင်းသည်။ လူအင်အားများပြားသည်၊ သူ့ကို လျှော့တွက်၍ မရဟုလည်း သုံးသပ်နေကြသည်။ သောင်ပြိုကမ်းပြိုမဟုတ်သည့်တိုင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်နိုင်ကောင်း အောင်မြင် နိုင်သည်ဟု မှန်းဆသူများလည်း ရှိနေပါ သည်။
NLD ပါတီကို သုံးသပ်ကြည့်ပြန်သောအခါ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်ပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွြဲွေကးကြော်သံ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်များကို ရာနှုန်းပြည် အကောင်အထည်မဖော် နိုင်သေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုကတိမတည်မှုအပေါ် ပြည်သူတွေ ဇဝေဇဝါ ဖြစ် နေကြပါသည်။ NLD ပါတီကို ဆက်၍ မဲပေးရမည်လား မဲမပေးရတော့ဘူးလား… ကတိကဝတ်များလည်း အကောင်အထည်မပေါ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက် မည်ဆိုသည့် ကိစ္စသည်လည်း တတိယပင်လုံ ကျင်းပဖို့ ရက်ကပင် သေသေချာချာ မရွေးနိုင်သေး၊ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဖို့မဟားဒယား ဆောင်ရွက်ရင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော တပ်မတော်သားများ၏ ထောက်ခံချက် ရဖို့ရန် မသေချာဘဲလျက် မည်သို့ပြင်နိုင်အံ့နည်း… အစိုးရနှင့် တပ်မတော် အဆင်ပြေရေး၊ အစိုးရတပ်မ တော် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ စည်းကိုက် ဝါးကိုက်ဖြစ်ရေး (တစ်နည်း) အမျိုးသားရင်ကြား စေ့ရေး စသည့်အချက်အားလုံး NLD ပါတီ၊ NLD အစိုးရက ဘာတစ်ခုမှ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းမပြုနိုင်သေး…. သို့ပေမယ့်လည်း ပြည်ခိုင် ဖြိုးကိုလည်း မယုံ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများကိုလည်း အထင်သေး၊ NLD ကိုပဲ မဲပေးဦးမှပဲလေ… ဆိုသူများ ရှိနိုင်သေးသောကြောင့် သောင်ပြိုကမ်းပြို မဟုတ် သည့်တိုင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ အောင်နိုင်ချေရှိသေးကြောင်း တွက်ချက်သူတွေက တွက်ချက်ကြသည်။ ယခင်က “ပါတီကိုပဲ ကြည့်ပါ”ဟူသည့်ဆောင်ပုဒ်မှ ယခုအခါ ပါတီကိုလည်း ကြည့်ဖို့ လိုသလို၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ကြည့်ဖို့လိုပြီဟူ၍ လေသံ ပြောင်းလဲလာပါသည်။ ထူးဆန်းသည်တစ်ခုက NLD ပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်တို့တွင် မည်သည့်ပါတီနှင့်မျှ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မည် မဟုတ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။ ထက်ဝက်ကျော် မဲမရခဲ့လျှင်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့်ဖြစ်စေ အခြားဗမာပါတီတစ်ခုခုဖြင့် ဖြစ်စေ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့်ဖြစ်စေ မဟာမိတ် ပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ယတိပြတ်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နားလည်ရပါ သည်။ ပြည်သူများ သတိမူရန်တစ်ခုမှာ အကယ် ၍ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အောင်မြင်မှုမရလျှင် မူလသဘော ထားကိုပြင်ပြီး ပါတီတစ်ခုခုနှင့် ပေါင်းမည်လား… သို့မဟုတ် တစ်မတ်သား တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပေါင်းမည်လား… စောင့်ကြည့် ဖို့ရန်သာရှိသည်။
ပါတီကြီးနှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် အနိုင်ရရှိပါက မည်သို့မျှ စောဒကတက်ရန် မရှိ၊ တိုင်းရင်းသားတို့အဖို့ လွှတ်တော်တွင် အတိုက်အခံ ဘက်ကသာ ရှိနေရုံဖြစ်သည်။ ယခုအခြေအနေတွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများက မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ရေးရေးကလေးငေးမျှော်ကိုး စောင့်ဆိုင်း ကြည့်နေကြသည်။ မိမိတို့တိုင်း ရင်းသားပါတီများက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ NLD ပါတီက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြားပါတီ များက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အနိုင်ရသည်ဆိုပါစို့ – မည်သည့် ပါတီကမှ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် အစိုးရဖွဲ့နိုင်တော့မည် မဟုတ် ပါ။ ထိုသို့သောအခါတွင် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ရတော့ မည်။ တိုင်းရင်းသားပါတီများသည် “ဒီတစ်ခေါက် တော့ မိမိတို့အလှည့်ပဲ” ဟူ၍ “ချို”သွေး မနေသင့်ကြသေး။ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဘာလုပ်သင့်သည်ကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြရမည်။ ခက်နေသည်က တိုင်းရင်းသား ပါတီများ စည်းလုံးညီညွတ်မှု မရှိကြ၊ ရခိုင်ဆိုလျှင် နှစ်ပါတီပေါင်းပြီးခါမှ ပြန်ပျက်သွားသည်။ ရှမ်းတွင် လည်း တိုင်းရင်းသားပါတီများစွာ ရှိသည်။ တစ်စု တစ်စည်းတည်း ပေါင်းစည်းညှိနှိုင်း၍ မရ၊ လောလော ဆယ်တွင် (United Nationalities Alliance-UNA) ၊ စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ နှင့် (Nationalities Brother-hood Federation – NBF) ညီနောင်တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်းဟူ၍ သည်နိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံ ရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ရှိ သည်။ တိုင်းရင်း သားများသာဖြစ်ကြသဖြင့် အဘယ်ကြောင့် ပါတီများ မပူးပေါင်းနိုင်ကြသနည်း၊ ပူးပေါင်းနိုင်လျှင်လည်း မဟာမိတ်မပြုနိုင်ကြသလော-မဟာမိတ် မဟုတ်လျှင် တောင် တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု မပြုသင့်ကြသလော….
ယခုအခါ ကရင်နီ (ကယား)ပြည်နယ်၊ ကချင် ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် များမှ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအချို့ တစ်ပါတီ တည်းအဖြစ် တရားဝင်ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းလာနိုင်သည် များ ရှိသည်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပါတီအားလုံး မဟုတ် သည့်တိုင် ပါတီအများစု ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလာခြင်းဖြစ် ၍ ကြိုဆိုရမည်သာဖြစ်သည်။
ကယားပြည်နယ်တွင် ကယားလူမျိုးစု ဒီမို ကရေစီပါတီ (Kayar Unity Demoracy Party) နှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမို ကရေစီပါတီ (All National Demo-cracy Party) နှစ်ပါတီ ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် (၁၀၅)ဖြင့် ကယား ပြည်နယ် ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ (Kayar State Democratic Party) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကယားပြည်နယ် တွင် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ (Kayan National Party) သီးခြားတစ်ပါတီကျန်ရှိနေသော်လည်း ရှမ်း ပြည်နယ် ဖယ်ခုံ မြို့နယ်အခြေစိုက် ဖြစ်သည်။ ကယား ပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ပါတီ၏အလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့သစ်ကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခဲ့ပြီး ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ်လုံးတွင် မြို့နယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း ထားရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကယားပြည်နယ်တွင် (Kareni National Progressive Party-KNPP) ကရင်နီ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဟုခေါ်သော တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ရှိပြီး NCA လက်မှတ် ရေးထိုးရန် ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရေတစ်ပါတီ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ကျင်းပသည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အနိုင်ရ ရှိခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ (PSDP) ၊ ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ (KSDDP) ၊ ကရင်ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ (KDP) နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်သော ကရင် အမျိုးသားပါတီ (KNUP) လေးပါတီပူးပေါင်းပြီး ကရင် အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KNDP) အမည်ဖြင့် ပူးပေါင်းပါတီသစ်ကို (၂၂ .၂ .၂၀၁၈) တွင် ပြည် ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြု မိန့်အမှတ် (၁၀၈)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီး ပါတီ၏ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့် ခရိုင်ပါတီ ကော်မတီ တစ်ခု၊ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီ ငါးခု၊ မြို့ဒေသ ကော် မတီနှစ်ခုနှင့် ရပ်/ကျေး ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပူးပေါင်းလိုက်သော လေးပါတီအနက် ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုဘဲ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီများသာ ပါဝင် ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းသည် ထူးခြား ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ပြည်မဘက်ရှိ ကရင်တိုင်းရင်း သားပါတီနှစ်ခုဖြစ်သော KPP နှင့် KNP တို့မှာ နယ်မြေ ဒေသကွာဝေးခြင်းနှင့် အခြားအကြောင်း အချက်တချို့ ကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ပူးပေါင်းလိုက်သော ပါတီနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ သို့ရာတွင် ၎င်းင်းတို့နှစ်ပါတီ သည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားကြမည်ဟု လေ့လာသိရှိရပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ် တွင် ပဒိုအောင်ဆန်း အဖွဲ့နှင့် စောသုမူဟဲ အဖွဲ့ဟူသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့မှာ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးကို လဲလှယ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ KNU, KNLA (PC) ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ၊ DKBA နှင့် KNU တို့မှာ လက်နက်ကိုင်ထားဆဲ ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ဖြစ်ပြီး DKBA မှနေ၍ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင် ပြောင်းသွားသည့် တပ်ဖွဲ့လည်းရှိသည်။ ထို့ပြင် သံတောင်မြောက်ခြမ်းတွင် KNU အဖြစ်မှ ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းအဖွဲ့ ရှိသည်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော DKBA အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်သွားသည့် ခွဲထွက် DKBA အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်း ရှိနေပါသည်။ ၄င်းတို့ အားလုံးလည်း KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး တွင် အတူတကွ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများဖြစ်သော်လည်း ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါ တသီးတခြားစီ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် တစ်ပြည်လုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် မှု ရပ်စဲရေး (NCA) စာချုပ်တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ယခင်က ကချင်ပါတီ ခုနစ် ပါတီရှိပါသည်။ ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Kachin Demorcatic Party – KDP)၊ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုက ရေစီပါတီ (Kachin Demorcatic Party – KDP) ၊ စည်းလုံးညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ – ကချင်ပြည်နယ် (Unity and Democracy Party – Kachin State – UDP-KS) ၊ ကချင်အမျိုးသား ကွန်ဂရက် (Kachin National Congress – KNC)၊ ကချင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (Kachin State Progressive Party – KSPP) ၊ လီဆူးအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီ (Lisu National Deve-lopment Party – LNDP) နှင့် လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေးပါတီ (Lhaovo Natio-nal Unity and Develop-ment Party) တို့ ဖြစ်သည်။
၄င်းတို့အနက် ကချင်ပြည် နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီ (KSPP) သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲ တွင် မှတ်ပုံတင် ခွင့် မရခဲ့ပါ။ လီဆူး နှင့် လော်ဝေါ်ပါတီ များသည် သီးခြား မျိုးနွယ်စု ပါတီ များဖြစ်ပြီး KDP, KSDP, UDP (KS),KNC တို့မှာ ကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်ပါတီကြီးများ ဖြစ်သည်။ ထိုလေး ပါတီတို့ ပေါင်းစည်းရန် သဘောတူခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်း၌ သဘောထား ကွဲလွဲမှုအချို့ကြောင့်KDP, KSDP, UDP (KS) သုံးပါတီသာ ပူးပေါင်းပြီး ကချင် ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ (Kachin State People’s Party – KSPP) အမည်ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် (၁၁၅)ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါသည်။
ပူးပေါင်းပါတီတွင် ပါတီကြီးငါးခုမှ တစ်ပါတီလျှင် ငါးဦးစီဖြင့် ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ၂၅ ဦးကို အချိုး ညီမျှစွာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပါတီငါးပါတီဆိုရာတွင် ပူးပေါင်းဖြစ် သွားသော သုံးပါတီနှင့် ယခင်မှတ်ပုံတင် ခွင့်မရတော့သော KSPP နှင့် KNC တို့မှ ပါတီဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်နေရာအချို့ အနိုင်ရ ရှိသော KSDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မနမ်တူးဂျာကို ပူးပေါင်းပါတီသစ်၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ UDP (KS) ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခက်ထိန်နန်ကို ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ-၁ အဖြစ်လည်း ကောင်း၊ KDP ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဂျီအောင် ခမ်းကို ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ-၂ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အတွင်း ရေးမှူးနှစ်ဦးကို KSDP နှင့် KDP ပါတီများမှလည်း ကောင်း ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ထားကြကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ ပူးပေါင်းဖြစ်တည် လာရေးအတွက် ကချင်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်း များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကချင်ပြည်နယ် အတိုင် ပင်ခံအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ တွန်းအား ပေးစေ့စပ်ညှိနှိုင်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် NCA လက်မှတ်မထိုး ရသေးသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှင့် ဌာနေပြည်သူ့စစ် များ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) သုံးဖွဲ့ရှိကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။ ကချင်ပူး ပေါင်းပါတီသည် ယခုအစီရင်ခံသည့် အချိန်အထိ မြို့နယ် ငါးမြို့နယ်တွင် ပါတီကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် တကယ့်ချင်းပါတီ သုံးပါတီ သာ ရှိသည်။ တိုင်းရင်းသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမျိုးနွယ် စုပါတီ ခေါ် (Ethnic Nationalty Development Party) သည် လည်းကောင်း၊ ပြည်မတွင် အခြေစိုက် သည့် ဇိုမီးနှင့် အရှိုချင်းပါတီသည်လည်းကောင်း၊ ချင်းမျိုးနွယ်စုထဲရှိ ချင်းပါတီ များဖြစ်သည်။ ချင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Chin National League of Democracy) အဖြစ် ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်း လိုက်သည့် ပါတီများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁။ ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Chin National Democratic Party)
၂။ ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (Chin League for Democracy)
၃။ ချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(Chin Progressive Party)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင် ပါတီပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၁၆/၂၀၁၉ ဖြင့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ချင်း ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ကိုးမြို့နယ်အနက် ယခု အစီရင် ခံချိန်တွင် မြို့နယ်လေးမြို့နယ်၌ ပါတီဆိုင်းဘုတ် တင်ခြင်း၊ မြို့နယ်ရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄င်းတို့ပါတီ၏ (CEC) ရွေးပြီးမပြီး မသိရသေးပါ။ Khumi (Khami) National Party (ခေါ်) ခူမီး (ခမီး) အမျိုးသားပါတီ (Ethnic National Development Party) (ခေါ်) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ၊ ASho Chin National Party (ခေါ်) အရှိုချင်း အမျိုးသားပါတီ၊ Zo National Region Development Party (ခေါ်) ဇိုတိုင်းရင်းသားဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ Zomi Congress for Democracy Party (ခေါ်) ဇိုမီးဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီများသည်လည်း ချင်း ပါတီများဖြစ်ကြပြီး မျိုးနွယ်စုသီးခြားဖြစ်ကြသဖြင့် ပူးပေါင်းပါတီထဲ၌ မပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်တွင် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (Chin National Front) ဟူသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ရှိပြီး အစိုးရနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်သည်။
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်တို့တွင် မွန်ဒေသ လုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ (All Mon Reguion Democracy Party) နှင့် မွန်အမျိုးသားပါတီ (Mon National Party) တို့ ပူး ပေါင်းပြီး မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (Mon Unity Party) အမည် ဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမိန့် အမှတ် ၁၁၇ ဖြင့် ပဲခူးနှင့် ကရင် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် မွန်ညီညွတ် ရေးပါတီ၏ မြို့နယ်ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပူးပေါင်းလိုက်သော မွန်ညီညွတ် ရေး ပါတီသို့ မွန်အမျိုးသမီးပါတီ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းခြင်း မရှိပါ။ မွန်အမျိုးသမီးပါတီသည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မွန်ပြည်နယ်တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (New Mon State Party) ဟူသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပြီး အစိုးရ နှင့် NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (Arakan National Party)သည် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Arakan League for Democracy) နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (Rakine Nationalities Develo-pment Party) တို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပူးပေါင်းခဲ့ရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ပါတီ ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်ပါတီများဖြစ်သည့် UNA နှင့် NDF အဖွဲ့များ သို့ ဝင်ရောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ကြသဖြင့် ထိုပါတီပူးပေါင်းမှုမှာ နောက်ပိုင်း တွင် ခိုင်မာခြင်း မရှိတော့ချေ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀-၃၁ ရက်နေ့များ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ၏ ညီလာခံတွင် ပါတီ၏ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသာထွန်း လှနှင့် အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်ပြည်စိုးတို့ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ၁၇ မြို့နယ်လုံးနှင့် ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီတိုင်းတို့၌ ပါတီ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုပါတီများမှာ ရခိုင်အမျိုးသား အင်အားစုပါတီ (Rakine National Force)၊ ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ (Arakan Front Party)၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီနှင့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီများ ဖြစ်ပြီး အခြားမျိုးနွယ်စုပါတီများမှာ ရန်ကုန် အခြေစိုက် ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (Ka Man National Development Party) ၊ ခမီအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (Kha Me National Development Party) ၊ မြိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ (Mro National Democracy Party) ၊ မြို တိုင်းရင်းသား ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (Mro National Develop-ment Party)၊ မြိုတိုင်းရင်း သားပါတီ (Mro National Party) ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသားအင်အားစု (Rakine State National United Party) ၊ ဒိုင်းနက်လူမျိုးများ တိုး တက်ရေးပါတီ (Daingnet National Development Party) စသည်ဖြင့် အခြားပါတီ ခုနစ်ပါတီလည်း ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဖြစ်သည့် ရခိုင်တပ်တော် (Arakan Army) နှင့် ရခိုင်ပြည်လွတ် မြောက်ရေးပါတီ (ALP) တို့ ရှိပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် သည် ပါတီအဖွဲ့အစည်းများသလောက် ပြဿနာ ပေါင်းစုံလည်း ရှိနေကြောင်း အားလုံး သိရှိကြ ပါသည်။ AA သည် NCA စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ထားခြင်း မရှိသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပြီး Arakan National Party – ALP သည် NCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း တို့ အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သော ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လက်ရှိအခြေအနေ၌ ပါတီကြီး နှစ်ခုဖြစ်သည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီ (Shan Nationalities Laegue for Democracy – SNLD) နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ (Shan Nationalities Democratic Party – SNDP) တို့အပြင် အခြားတိုင်းရင်းသားပါတီ ပေါင်းများစွာ ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အခါ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ANDP) ၊ ဓနု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (DNDP)၊ ဓနုအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (DNOP) ၊ ရှမ်း ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (ESSDDP) ၊ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးပါတီ (INDP) ၊ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ (KNP)၊ ကိုး ကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ (KDUP)၊ လားဟူ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (LHNDP) ၊ ပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် (PNO) ၊ ရှမ်းနီ-တိုင်းလိုင်နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စု များ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (SnNSESP) ၊ တအောင်း- ပလောင် အမျိုးသားပါတီ (TAPNP) ၊ တိုင်းလိုင်ရှမ်းနီ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP) ၊ ပြည်ထောင်စု ပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပအမဖ)ပါတီ (U Oa ONO)၊ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက် တစ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (WLDDP) ၊ “ဝ”အမျိုး သား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (WNUN) စသည်ဖြင့် ၁၅ ပါတီရှိပါသည်။
ထို့အပြင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း၌ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ငါးခုရှိသည်။ မြို့နယ် ငါးမြို့ နယ်ဖြင့် ဖွဲ့ထားသော ‘ဝ’၊ မြို့နယ် သုံးမြို့ နယ်ဖြင့် ဖွဲ့ထားသော ‘ပအို့ဝ်’၊ မြို့နယ် နှစ်မြို့နယ်စီဖြင့် ဖွဲ့ထားသော ‘တအောင်း-ပလောင်’၊ ‘ကိုးကန့်’၊ ‘ဓနု’ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြား တိုင်းရင်းသား မျိုး နွယ်စုပါတီများ နှင့် ရှမ်းပါတီများ ပူးပေါင်းရန် မဆို ထားနှင့် ရှမ်းပါတီ အချင်းချင်း မဟာ မိတ်ပြုရေးပင် မဆောင်နိုင်သေး ကြောင်း တွေ့ရပါ သည်။ သို့သော် ရှမ်းပြည် ညီညွတ် ရေး ကော်မတီ (Committe for Shan State Unity – CSSU) ကိုမူ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရှေ့နေများကွန်ရက်၊ ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့၊ ရှမ်းပြည် မျိုးဆက်သစ်၊ ရှမ်းရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အဖွဲ့၊ RCSS နှင့် စိုင်ကျော့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ခြောက်လတစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံ၍ ရှမ်းတစ်ပြည်လုံး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် တိုးတက် ရေးတို့အတွက် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် SNLD ပါတီ (ခေါ်) ကျားခေါင်း ပါတီ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု အသွင် ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄င်းအပြင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၇ ပါတီအနက် ၁၁ ပါတီပူးပေါင်းပြီး ရှမ်းပြည် တိုင်းရင်းသား ပါတီများအဖွဲ့ချုပ် (League for Shan Ethnic Political Parties – LSSEPP) ကိုလည်း ဖွဲ့ စည်းထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ခွန်ထွန်းဦးနှင့် စိုင်း အိုက်ပေါင်းတို့ ရှမ်းခေါင်း ဆောင်နှစ်ဦးက ကျား ခေါင်းပါတီအမည်ဖြင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရွေး ကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း ခွန်ထွန်းဦး အဖမ်းခံရသည့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကျားခေါင်း ပါတီ လှုပ်ရှားမှု လျော့နည်းလာသည်။ ယင်းနောက် ၂၀၁၀ တွင် စိုင်းအိုက်ပေါင်းမှ SNDP (ခေါ်) ကျားဖြူပါတီကို ဖွဲ့ စည်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချိန်၌ ခွန်ထွန်းဦးတို့၏ ကျားခေါင်း ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်မှ ကျားခေါင်းပါတီ ရွေးကောက် ပွဲပြန်ဝင်ကြောင်း လေ့လာ သိရှိရပါသည်။ ဆိုရပါလျှင် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံတို့၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွင်လည်း လွန်စွာ ရှုပ်ထွေး အကဲဆတ်လှကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။
ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး ပါတီများ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များအကြောင်းရေးသားဖော်ပြရာ၌ ရှေ့နောက်မညီ ညွတ်မှုများ၊ အချိန်ကာလလွဲမှားနေသည်များ ရှိနေ နိုင်သည်ဖြစ်၍ နားလည်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ် ခံလိုပါသည်။ စင်စစ် တိုင်းရင်းသားများသည်လည်း သည်မြေထဲမှ မွေး၊ သည်မြေထဲမှာသာ နေသူများဖြစ်၍ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်လိုစိတ်ရှိကြမည်မှာ ဧကန် မလွဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း အကွဲကွဲအပြားပြား အမျိုးမျိုးသောပါတီများ၊ လက် နက်ကိုင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ လားရာကို မည်သို့ မျှ ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်မပေးနိုင်ပါ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ ၁၉၄၈ တွင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ မပေါ်ပေါက်ခဲ့။ ဖဆပလ၊ ပထစ၊ ပမညတ၊ တည်မြဲ-သန့်ရှင်း စသည့် ဗမာပါတီများသာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၆ ခုနှစ်များတွင် ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲများ၌ မည်သည့်တိုင်းရင်း သား နိုင်ငံရေးပါတီကမျှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မရှိ၊ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းလည်း မရှိခဲ့၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်၏ တစ်ပါတီအာဏာရှင် ခေတ်တွင် ဘယ် တိုင်းရင်းသားကမျှ ပါတီထောင်ရန် မစဉ်းစားဝံ့ကြ၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ကျင်းပပေးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ၌ တိုင်းရင်းသားပါတီ အနည်းငယ်ငယ်သာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှု လောက်လောက်လားလား မရှိခဲ့ပါ။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသောအခါ တိုင်းရင်းသားပါတီများစွာ ထူထောင်လာကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည်၊ များများစားစား မနိုင်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အခြေအနေပို၍ဆိုးသည်။ သောင်ပြိုကမ်းပြို ရှုံး ကြသည်။ ထိုတော့မှ တိုင်းရင်းသားများ ကွဲပြဲ၍ မရ ကြောင်း၊ မသင့်ကြောင်း၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိမြင် လာကြသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ပေါင်းစည်းရန် ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် ရာနှုန်းပြည့် မအောင်မြင်၊ တစ်ပါတီကျန် နှစ်ပါတီကျန် ဖြစ်နေ သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ကလည်း UNFC ဖွဲ့လိုက်၊ ပြန်ခွာလိုက် PPST မှ PPCM လိုလို၊ NCA ထိုးသူထိုး၊ မထိုးသူမထိုး၊ အမျိုး မျိုးအဖုံဖုံ သဘောထားချင်း မဆုံ မညီကြလျှင် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို မည်သို့လှမ်းကိုင်ကြမည်နည်း။ UNA နှင့် NBF ခေါ် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီ များအစုအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့မှနေပြီး တစ်ဖွဲ့တည်းထား၍ မရ နိုင်သလော။ ယခု ပြည်နယ်ခုနစ်ခုအနက် ပြည်နယ် ငါးခု တွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ ပူးပေါင်း လာကြသည်။ ထိုပူးပေါင်းပါတီများနှင့် UNA/NBF တစ်သံတည်းထွက်ပြီး တိုင်းရင်းသားအရေးကို ဆောင် ရွက်ပေးကြလျှင် မကောင်းလေသလော…..။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံ ရေးပါတီ များ မည်သို့စဉ်းစားကြမည်နည်း။ ၂၀၂၀ အလွန်ထွက်ပေါ် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ် မည်သို့ကြိုတင်ဥာဏ် ဆင်ကြမည်နည်း။ တိုင်းရင်းသား တို့၏ အခွင့်အရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားများ မည် သည့်ဘက်သို့ ရွေ့လျားသင့်နည်း…. တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်တိုင်သာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အဆုံးအဖြတ်ပေး အဖြေ ရှာရတော့မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမြား စတငျသညျ့ ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈနှငျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈမြားကို ပွနျ ပွောငျးစောငျးငဲ့ကွညျ့လြှငျ ပါတီကွီးနှဈခုဖွဈသညျ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီနှငျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျတို့သညျ ရှေးကောကျပှဲတှငျ တဈလှညျ့စီ အောငျပှဲခံကွကွောငျး သိရှိကွပွီး ဖွဈပါသညျ။ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံရေးပါတီမြားမှာ အောငျပှဲ ဆငျနိုငျခဲ့ခွငျး မရှိကွပါ။ အထိုကျအလြောကျ အနိုငျရရှိခဲ့သော ရခိုငျနှငျ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီမြားသညျလညျး အစိုးရဖှဲ့နိုငျသညျအထိ လောကျလောကျလားလား အောငျမွငျမှု မရခဲ့ကွပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈ၊ ရှေးကောကျပှဲ ပွညျနယျလှတျတျောအဆငျ့တှငျ ရခိုငျပွညျနယျမှ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားပါတီမြား လှတျတျောကိုယျစားလှယျအမြားစု အနိုငျရရှိခဲ့သျောလညျး ပွညျ နယျအစိုးရ (ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ) ရှေးခယျြဖှဲ့စညျးခှငျ့ မရခဲ့ပါ။ ပွညျထောငျစုလှတျတျောတှငျ NLD ပါတီက အမတျ အမြားစုအနိုငျရခဲ့သဖွငျ့ NLD ပါတီမှ နိုငျငံ တျောသမ်မတ ရှေးခယျြခှငျ့ရခဲ့ပွီး ဥပဒအေရ သမ်မတ သညျ ပွညျနယျနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျမြားကို ခနျ့အပျခှငျ့ရှိရာ ရခိုငျ ပွညျနယျတှငျ ရခိုငျးတိုငျးရငျး သားပါတီမြားက အမတျ အမြားစု အနိုငျရခဲ့သျောလညျး ပွညျနယျအစိုးရ (ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ) ရှေးခယျြ ခနျ့အပျခှငျ့ မရရှိခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျ အခြိနျမြားစှာ မကနျြတော့ပါ။ နိုငျငံရေးပါတီ၊ နိုငျငံရေး လလေ့ာသူ၊ တတျသိပညာရှငျမြား အပါအဝငျ ပွညျသူ တဈရပျလုံးက ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ၏ ဖွဈနိုငျ ဖှယျရာက အဖွမြေားကို အမြိုးမြိုး သုံးသပျဝဖေနျ ခနျ့မှနျးမှုတှေ ပေးနကွေပါတယျ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ရှေး ကောကျပှဲတှငျ မရှုမလှ ရှုံးနိမျ့ခဲ့သော ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ ပွနျလာနိုငျဦးမလား တှေးကွညျ့ကွသညျ။ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ ဆကျစပျမှုရှိခဲ့သညျ့ တိုငျးရငျးသား စညျးလုံးညီညှတျ ရေးပါတီ (တစည) ၏ လားရာကို လလေ့ာသုံးသပျ ကွညျ့ပါက ပွနျလာနိုငျရနျ သိပျမမွငျ၊ စဈအုပျခြုပျရေး ကာလတဈလြှောကျလုံး ပွညျသူတှေ ခါးစညျးခံခဲ့ရ သညျ့ အဖွဈသနဈမြားကို ပွညျသူတှေ မနေို့ငျကွဦးမညျ မထငျ၊ မမနေို့ငျခဲ့ခွငျးကွောငျ့လညျး အငွိမျးစား တပျမ တျောသား အမြားစုနှငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ ပွညျခိုငျဖွိုး ပါတီကို လုံးလုံးလြားလြားနီးပါး ဥပက်ခာပွုခဲ့ပွီး NLD ပါတီကို သောငျပွိုကမျးပွို မဲပေးခဲ့ကွခွငျးက သကျသေ ပငျဖွဈသညျ။ စဈသားဆိုသညျ ပငျစငျမစားသေးသူ ရော၊ အငွိမျးစားပွီးသူမြားကိုပါ အားလုံးရောပွီး ပွညျသူတှကေ ကွောကျရှံ့ရှောငျဖယျနကွေသညျ့သဘော တှရေ့သညျ။ သို့ရာတှငျ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီက ရနျပုံငှေ တောငျ့တငျးသညျ။ လူအငျအားမြားပွားသညျ၊ သူ့ကို လြှော့တှကျ၍ မရဟုလညျး သုံးသပျနကွေသညျ။ သောငျပွိုကမျးပွိုမဟုတျသညျ့တိုငျ ၁၅ ရာခိုငျနှုနျး၊ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျး၊ ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးအောငျမွငျနိုငျကောငျး အောငျမွငျ နိုငျသညျဟု မှနျးဆသူမြားလညျး ရှိနပေါ သညျ။
NLD ပါတီကို သုံးသပျကွညျ့ပွနျသောအခါ ၂၀ဝ၅ ခုနှဈပါတီ၏ ရှေးကောကျပှွဲှေကးကွျောသံ၊ ရှေးကောကျပှဲ ကတိကဝတျမြားကို ရာနှုနျးပွညျ အကောငျအထညျမဖျော နိုငျသေးသညျကို တှရေ့သညျ။ ထိုကတိမတညျမှုအပျေါ ပွညျသူတှေ ဇဝဇေဝါ ဖွဈ နကွေပါသညျ။ NLD ပါတီကို ဆကျ၍ မဲပေးရမညျလား မဲမပေးရတော့ဘူးလား… ကတိကဝတျမြားလညျး အကောငျအထညျမပျေါ၊ ငွိမျးခမျြးရေး ဆောငျရှကျ မညျဆိုသညျ့ ကိစ်စသညျလညျး တတိယပငျလုံ ကငျြးပဖို့ ရကျကပငျ သသေခြောခြာ မရှေးနိုငျသေး၊ အခွခေံ ဥပဒကေို ပွငျဖို့မဟားဒယား ဆောငျရှကျရငျး ၂၅ ရာခိုငျနှုနျးသော တပျမတျောသားမြား၏ ထောကျခံခကျြ ရဖို့ရနျ မသခြောဘဲလကျြ မညျသို့ပွငျနိုငျအံ့နညျး… အစိုးရနှငျ့ တပျမတျော အဆငျပွရေေး၊ အစိုးရတပျမ တျော တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့အစညျးမြား စညျးကိုကျ ဝါးကိုကျဖွဈရေး (တဈနညျး) အမြိုးသားရငျကွား စရေ့ေး စသညျ့အခကျြအားလုံး NLD ပါတီ၊ NLD အစိုးရက ဘာတဈခုမှ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ အကောငျအထညျ ဖျောခွငျးမပွုနိုငျသေး…. သို့ပမေယျ့လညျး ပွညျခိုငျ ဖွိုးကိုလညျး မယုံ၊ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားကိုလညျး အထငျသေး၊ NLD ကိုပဲ မဲပေးဦးမှပဲလေ… ဆိုသူမြား ရှိနိုငျသေးသောကွောငျ့ သောငျပွိုကမျးပွို မဟုတျ သညျ့တိုငျ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျး၊ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျတော့ အောငျနိုငျခရြှေိသေးကွောငျး တှကျခကျြသူတှကေ တှကျခကျြကွသညျ။ ယခငျက “ပါတီကိုပဲ ကွညျ့ပါ”ဟူသညျ့ဆောငျပုဒျမှ ယခုအခါ ပါတီကိုလညျး ကွညျ့ဖို့ လိုသလို၊ လူပုဂ်ဂိုလျကိုလညျး ကွညျ့ဖို့လိုပွီဟူ၍ လသေံ ပွောငျးလဲလာပါသညျ။ ထူးဆနျးသညျတဈခုက NLD ပါတီသညျ ရှေးကောကျပှဲမတိုငျမီနှငျ့ ရှေးကောကျပှဲ အလှနျတို့တှငျ မညျသညျ့ပါတီနှငျ့မြှ ပူးပေါငျးဆောငျ ရှကျမညျ မဟုတျကွောငျး တရားဝငျကွညောလိုကျ ခွငျးဖွဈသညျ။ ထကျဝကျကြျော မဲမရခဲ့လြှငျလညျး ပွညျခိုငျဖွိုးနှငျ့ဖွဈစေ အခွားဗမာပါတီတဈခုခုဖွငျ့ ဖွဈစေ၊ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားနှငျ့ဖွဈစေ မဟာမိတျ ပွု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမညျ့ အစီအစဉျမရှိကွောငျး ယတိပွတျကွညောခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု နားလညျရပါ သညျ။ ပွညျသူမြား သတိမူရနျတဈခုမှာ အကယျ ၍ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော အောငျမွငျမှုမရလြှငျ မူလသဘော ထားကိုပွငျပွီး ပါတီတဈခုခုနှငျ့ ပေါငျးမညျလား… သို့မဟုတျ တဈမတျသား တပျမတျောသား လှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ ပေါငျးမညျလား… စောငျ့ကွညျ့ ဖို့ရနျသာရှိသညျ။
ပါတီကွီးနှဈခုအနကျ တဈခုခုက ၅၀ ရာခိုငျနှုနျး ကြျော အနိုငျရရှိပါက မညျသို့မြှ စောဒကတကျရနျ မရှိ၊ တိုငျးရငျးသားတို့အဖို့ လှတျတျောတှငျ အတိုကျအခံ ဘကျကသာ ရှိနရေုံဖွဈသညျ။ ယခုအခွအေနတှေငျ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံရေးပါတီမြားက မြှျောလငျ့ခကျြ ရောငျခွညျရေးရေးကလေးငေးမြှျောကိုး စောငျ့ဆိုငျး ကွညျ့နကွေသညျ။ မိမိတို့တိုငျး ရငျးသားပါတီမြားက ၂၀ ရာခိုငျနှုနျး၊ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီက ၂၅ ရာခိုငျနှုနျး၊ NLD ပါတီက ၂၅ ရာခိုငျနှုနျး၊ အခွားပါတီ မြားက ၁၀ ရာခိုငျနှုနျး အနိုငျရသညျဆိုပါစို့ – မညျသညျ့ ပါတီကမှ လှတျလှတျကြှတျကြှတျ အစိုးရဖှဲ့နိုငျတော့မညျ မဟုတျ ပါ။ ထိုသို့သောအခါတှငျ တဈခုခုတော့ လုပျရတော့ မညျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားသညျ “ဒီတဈခေါကျ တော့ မိမိတို့အလှညျ့ပဲ” ဟူ၍ “ခြို”သှေး မနသေငျ့ကွသေး။ တိုငျးရငျးသားပါတီမြား ဘာလုပျသငျ့သညျကို ဆှေးနှေး တိုငျပငျကွရမညျ။ ခကျနသေညျက တိုငျးရငျးသား ပါတီမြား စညျးလုံးညီညှတျမှု မရှိကွ၊ ရခိုငျဆိုလြှငျ နှဈပါတီပေါငျးပွီးခါမှ ပွနျပကျြသှားသညျ။ ရှမျးတှငျ လညျး တိုငျးရငျးသားပါတီမြားစှာ ရှိသညျ။ တဈစု တဈစညျးတညျး ပေါငျးစညျးညှိနှိုငျး၍ မရ၊ လောလော ဆယျတှငျ (United Nationalities Alliance-UNA) ၊ စညျးလုံးညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားမဟာမိတျအဖှဲ့ နှငျ့ (Nationalities Brother-hood Federation – NBF) ညီနောငျတိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီမြား ဖကျဒရေးရှငျးဟူ၍ သညျနိုငျငံတှငျ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံ ရေးပါတီမြား အစုအဖှဲ့ကွီးနှဈဖှဲ့ရှိ သညျ။ တိုငျးရငျး သားမြားသာဖွဈကွသဖွငျ့ အဘယျကွောငျ့ ပါတီမြား မပူးပေါငျးနိုငျကွသနညျး၊ ပူးပေါငျးနိုငျလြှငျလညျး မဟာမိတျမပွုနိုငျကွသလော-မဟာမိတျ မဟုတျလြှငျ တောငျ တိုငျးရငျးသားအရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ညှိနှိုငျး တိုငျပငျဆှေးနှေးမှု မပွုသငျ့ကွသလော….
ယခုအခါ ကရငျနီ (ကယား)ပွညျနယျ၊ ကခငျြ ပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျ၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျ မြားမှ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံရေးပါတီအခြို့ တဈပါတီ တညျးအဖွဈ တရားဝငျပူးပေါငျး ဖှဲ့စညျးလာနိုငျသညျ မြား ရှိသညျ။ ပွညျနယျအတှငျးရှိ ပါတီအားလုံး မဟုတျ သညျ့တိုငျ ပါတီအမြားစု ပူးပေါငျးဖှဲ့စညျးလာခွငျးဖွဈ ၍ ကွိုဆိုရမညျသာဖွဈသညျ။
ကယားပွညျနယျတှငျ ကယားလူမြိုးစု ဒီမို ကရစေီပါတီ (Kayar Unity Demoracy Party) နှငျ့ လူမြိုးပေါငျးစုံ ဒီမို ကရစေီပါတီ (All National Demo-cracy Party) နှဈပါတီ ပူးပေါငျးပွီး ၂၀၁၇ ခုနှဈတှငျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ မှတျပုံတငျ ခှငျ့ပွုမိနျ့အမှတျ (၁၀၅)ဖွငျ့ ကယား ပွညျနယျ ဒီမို ကရကျတဈပါတီ (Kayar State Democratic Party) ကို ဖှဲ့စညျးတညျထောငျခဲ့သညျ။ ကယားပွညျနယျ တှငျ ကယနျးအမြိုးသားပါတီ (Kayan National Party) သီးခွားတဈပါတီကနျြရှိနသေျောလညျး ရှမျး ပွညျနယျ ဖယျခုံ မွို့နယျအခွစေိုကျ ဖွဈသညျ။ ကယား ပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီသညျ ပါတီ၏အလုပျအမှု ဆောငျအဖှဲ့သဈကို ဒီမိုကရစေီနညျးကကြ ရှေးကောကျ တငျမွှောကျခဲ့ပွီး ကယားပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျ ခုနဈမွို့နယျလုံးတှငျ မွို့နယျကျောမတီမြား ဖှဲ့စညျး ထားရှိပွီးဖွဈသညျ။ ကယားပွညျနယျတှငျ (Kareni National Progressive Party-KNPP) ကရငျနီ အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီဟုချေါသော တိုငျးရငျး သားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ တဈဖှဲ့ရှိပွီး NCA လကျမှတျ ရေးထိုးရနျ ညှိနှိုငျးနဆေဲဖွဈကွောငျး သိရပါသညျ။ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရတေဈပါတီ ဖှဲ့စညျးပွီးနောကျ ကငျြးပသညျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျတဈဦး အနိုငျရ ရှိခဲ့သညျ။
ကရငျပွညျနယျတှငျ ဖလုံ-စဝျေါ ဒီမိုကရကျ တဈပါတီ (PSDP) ၊ ကရငျပွညျနယျ ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ပါတီ (KSDDP) ၊ ကရငျဒီမိုကရကျ တဈပါတီ (KDP) နှငျ့ စညျးလုံးညီညှတျသော ကရငျ အမြိုးသားပါတီ (KNUP) လေးပါတီပူးပေါငျးပွီး ကရငျ အမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ (KNDP) အမညျဖွငျ့ ပူးပေါငျးပါတီသဈကို (၂၂ .၂ .၂၀၁၈) တှငျ ပွညျ ထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ မှတျပုံတငျ ခှငျ့ပွု မိနျ့အမှတျ (၁၀၈)ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထူထောငျခဲ့ပွီး ပါတီ၏ အလုပျအမှုဆောငျကျောမတီနှငျ့ ခရိုငျပါတီ ကျောမတီ တဈခု၊ မွို့နယျပါတီကျောမတီ ငါးခု၊ မွို့ဒသေ ကျော မတီနှဈခုနှငျ့ ရပျ/ကြေး ကျောမတီမြားကို ဖှဲ့စညျး တညျထောငျခဲ့ပွီးဖွဈပါသညျ။ ပူးပေါငျးလိုကျသော လေးပါတီအနကျ ဖလုံ-စဝျေါ ဒီမိုကရကျတဈပါတီကို ဖကျြသိမျးခွငျးမပွုဘဲ ဖလုံ-စဝျေါ ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီမြားသာ ပါဝငျ ပူးပေါငျးလိုကျခွငျးသညျ ထူးခွား ခကျြတဈရပျ ဖွဈသညျ။ ပွညျမဘကျရှိ ကရငျတိုငျးရငျး သားပါတီနှဈခုဖွဈသော KPP နှငျ့ KNP တို့မှာ နယျမွေ ဒသေကှာဝေးခွငျးနှငျ့ အခွားအကွောငျး အခကျြတခြို့ ကွောငျ့ ကရငျပွညျနယျရှိ ပူးပေါငျးလိုကျသော ပါတီနှငျ့ ပေါငျးစညျးနိုငျခဲ့ခွငျး မရှိပါ။ သို့ရာတှငျ ၎င်းငျးငျးတို့နှဈပါတီ သညျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျ သှားကွမညျဟု လလေ့ာသိရှိရပါသညျ။ ကရငျပွညျနယျ တှငျ ပဒိုအောငျဆနျး အဖှဲ့နှငျ့ စောသုမူဟဲ အဖှဲ့ဟူသညျ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ နှဈဖှဲ့မှာ လကျနကျနှငျ့ ငွိမျးခမျြး ရေးကို လဲလှယျခဲ့ကွပွီးဖွဈသညျ။ KNU, KNLA (PC) ငွိမျးခမျြးရေးကောငျစီ၊ DKBA နှငျ့ KNU တို့မှာ လကျနကျကိုငျထားဆဲ ကရငျလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့မြား ဖွဈပွီး DKBA မှနေ၍ နယျခွားစောငျ့တပျ အသှငျ ပွောငျးသှားသညျ့ တပျဖှဲ့လညျးရှိသညျ။ ထို့ပွငျ သံတောငျမွောကျခွမျးတှငျ KNU အဖွဈမှ ပွညျသူ့စဈ တပျဖှဲ့အဖွဈ အသှငျပွောငျးအဖှဲ့ ရှိသညျ။ အပဈအခတျ ရပျစဲထားသော DKBA အဖှဲ့မှ ခှဲထှကျသှားသညျ့ ခှဲထှကျ DKBA အဖှဲ့တဈဖှဲ့လညျး ရှိနပေါသညျ။ ၎င်းငျးတို့ အားလုံးလညျး KNU ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံး တှငျ အတူတကှ ဆောငျရှကျခဲ့သူမြားဖွဈသျောလညျး ပွညျတှငျးသို့ ဝငျရောကျလာသောအခါ တသီးတခွားစီ ဖွဈခဲ့သညျ။ သို့ရာတှငျ တဈပွညျလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျ မှု ရပျစဲရေး (NCA) စာခြုပျတှငျ လကျမှတျ ရေးထိုးခဲ့ ကွပွီး ဖွဈသညျ။
ကခငျြပွညျနယျတှငျ ယခငျက ကခငျြပါတီ ခုနဈ ပါတီရှိပါသညျ။ ကခငျြဒီမိုကရကျတဈပါတီ (Kachin Demorcatic Party – KDP)၊ ကခငျြပွညျနယျ ဒီမိုက ရစေီပါတီ (Kachin Demorcatic Party – KDP) ၊ စညျးလုံးညီညှတျသော ဒီမိုကရကျတဈပါတီ – ကခငျြပွညျနယျ (Unity and Democracy Party – Kachin State – UDP-KS) ၊ ကခငျြအမြိုးသား ကှနျဂရကျ (Kachin National Congress – KNC)၊ ကခငျြပွညျနယျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (Kachin State Progressive Party – KSPP) ၊ လီဆူးအမြိုးသား ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျရေးပါတီ (Lisu National Deve-lopment Party – LNDP) နှငျ့ လျောဝျေါအမြိုးသားစညျးလုံးညီညှတျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုး ရေးပါတီ (Lhaovo Natio-nal Unity and Develop-ment Party) တို့ ဖွဈသညျ။
၎င်းငျးတို့အနကျ ကခငျြပွညျ နယျ ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျရေးပါတီ (KSPP) သညျ ၂၀၁၀ ရှေးကောကျ ပှဲ တှငျ မှတျပုံတငျ ခှငျ့ မရခဲ့ပါ။ လီဆူး နှငျ့ လျောဝျေါပါတီ မြားသညျ သီးခွား မြိုးနှယျစု ပါတီ မြားဖွဈပွီး KDP, KSDP, UDP (KS),KNC တို့မှာ ကခငျြမြိုးနှယျစုဝငျပါတီကွီးမြား ဖွဈသညျ။ ထိုလေး ပါတီတို့ ပေါငျးစညျးရနျ သဘောတူခဲ့ကွသျောလညျး နောကျပိုငျး၌ သဘောထား ကှဲလှဲမှုအခြို့ကွောငျ့KDP, KSDP, UDP (KS) သုံးပါတီသာ ပူးပေါငျးပွီး ကခငျြ ပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ (Kachin State People’s Party – KSPP) အမညျဖွငျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဇူလိုငျလအတှငျး ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ မှတျပုံတငျ ခှငျ့ပွုမိနျ့အမှတျ (၁၁၅)ဖွငျ့ မှတျပုံတငျခှငျ့ရခဲ့ပွီး ဖွဈ ပါသညျ။
ပူးပေါငျးပါတီတှငျ ပါတီကွီးငါးခုမှ တဈပါတီလြှငျ ငါးဦးစီဖွငျ့ ဦးဆောငျကျောမတီဝငျ ၂၅ ဦးကို အခြိုး ညီမြှစှာ ဖှဲ့စညျးထားပါသညျ။ ပါတီငါးပါတီဆိုရာတှငျ ပူးပေါငျးဖွဈ သှားသော သုံးပါတီနှငျ့ ယခငျမှတျပုံတငျ ခှငျ့မရတော့သော KSPP နှငျ့ KNC တို့မှ ပါတီဝငျမြား ဖွဈကွပါသညျ။
ရှေးကောကျပှဲတှငျ အမတျနရောအခြို့ အနိုငျရ ရှိသော KSDP ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာ မနမျတူးဂြာကို ပူးပေါငျးပါတီသဈ၏ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈလညျးကောငျး၊ UDP (KS) ပါတီ၏ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးခကျထိနျနနျကို ဒုတိယ ဥက်ကဋ်ဌ-၁ အဖွဈလညျး ကောငျး၊ KDP ပါတီ၏ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဂြီအောငျ ခမျးကို ဒုတိယ ဥက်ကဋ်ဌ-၂ အဖွဈလညျးကောငျး၊ အတှငျး ရေးမှူးနှဈဦးကို KSDP နှငျ့ KDP ပါတီမြားမှလညျး ကောငျး ညှိနှိုငျးရှေးခယျြထားကွကွောငျး သိရှိရပါ သညျ။ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ ပူးပေါငျးဖွဈတညျ လာရေးအတှကျ ကခငျြဘာသာရေး အဖှဲ့အစညျးမြား၊ လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ယဉျကြေးမှု အဖှဲ့အစညျး မြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ ကခငျြပွညျနယျ အတိုငျ ပငျခံအဖှဲ့မှ ဦးဆောငျ၍ တှနျးအား ပေးစစေ့ပျညှိနှိုငျး ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါသညျ။
ကခငျြပွညျနယျတှငျ NCA လကျမှတျမထိုး ရသေးသော ကခငျြလှတျမွောကျရေးအဖှဲ့ (KIO) နှငျ့ ဌာနပွေညျသူ့စဈ မြား၊ နယျခွားစောငျ့တပျ (BGF) သုံးဖှဲ့ရှိကွောငျး လလေ့ာသိရှိရပါသညျ။ ကခငျြပူး ပေါငျးပါတီသညျ ယခုအစီရငျခံသညျ့ အခြိနျအထိ မွို့နယျ ငါးမွို့နယျတှငျ ပါတီကျောမတီမြား ဖှဲ့စညျး ထားပွီး ဖွဈကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
ခငျြးပွညျနယျတှငျ တကယျ့ခငျြးပါတီ သုံးပါတီ သာ ရှိသညျ။ တိုငျးရငျးသား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးမြိုးနှယျ စုပါတီ ချေါ (Ethnic Nationalty Development Party) သညျ လညျးကောငျး၊ ပွညျမတှငျ အခွစေိုကျ သညျ့ ဇိုမီးနှငျ့ အရှိုခငျြးပါတီသညျလညျးကောငျး၊ ခငျြးမြိုးနှယျစုထဲရှိ ခငျြးပါတီ မြားဖွဈသညျ။ ခငျြး အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျပါတီ (Chin National League of Democracy) အဖွဈ ပူးပေါငျး ဖှဲ့စညျး လိုကျသညျ့ ပါတီမြားမှာ အောကျပါအတိုငျးဖွဈသညျ။
၁။ ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (Chin National Democratic Party)
၂။ ခငျြးဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (Chin League for Democracy)
၃။ ခငျြးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ(Chin Progressive Party)
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ ၁၁ ရကျတှငျ ပါတီပူးပေါငျး ဖှဲ့စညျးတညျထောငျခှငျ့ မှတျပုံတငျအမှတျ ၁၁၆/၂၀၁၉ ဖွငျ့ တရားဝငျ မှတျပုံတငျခှငျ့ရရှိခဲ့ပါသညျ။ ခငျြး ပွညျနယျရှိ မွို့နယျ ကိုးမွို့နယျအနကျ ယခု အစီရငျ ခံခြိနျတှငျ မွို့နယျလေးမွို့နယျ၌ ပါတီဆိုငျးဘုတျ တငျခွငျး၊ မွို့နယျရုံးဖှငျ့လှဈခွငျး စသညျတို့ကို ဖှဲ့စညျး ဆောငျရှကျထားပွီးဖွဈကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
၎င်းငျးတို့ပါတီ၏ (CEC) ရှေးပွီးမပွီး မသိရသေးပါ။ Khumi (Khami) National Party (ချေါ) ခူမီး (ခမီး) အမြိုးသားပါတီ (Ethnic National Development Party) (ချေါ) တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြား ဖှံ့ဖွိုးရေး ပါတီ၊ ASho Chin National Party (ချေါ) အရှိုခငျြး အမြိုးသားပါတီ၊ Zo National Region Development Party (ချေါ) ဇိုတိုငျးရငျးသားဒသေ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ၊ Zomi Congress for Democracy Party (ချေါ) ဇိုမီးဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျပါတီမြားသညျလညျး ခငျြး ပါတီမြားဖွဈကွပွီး မြိုးနှယျစုသီးခွားဖွဈကွသဖွငျ့ ပူးပေါငျးပါတီထဲ၌ မပါဝငျကွောငျး သိရှိရပါသညျ။ ခငျြးပွညျနယျတှငျ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး (Chin National Front) ဟူသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့ရှိပွီး အစိုးရနှငျ့ NCA လကျမှတျရေးထိုးပွီး ဖွဈသညျ။
မှနျပွညျနယျ မျောလမွိုငျတို့တှငျ မှနျဒသေ လုံးဆိုငျရာ ဒီမိုကရစေီပါတီ (All Mon Reguion Democracy Party) နှငျ့ မှနျအမြိုးသားပါတီ (Mon National Party) တို့ ပူး ပေါငျးပွီး မှနျညီညှတျရေးပါတီ (Mon Unity Party) အမညျ ဖွငျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဇှနျလ ၁၁ ရကျတှငျ ပွညျထောငျစုရှေး ကောကျပှဲကျောမရှငျ၏ မှတျပုံတငျခှငျ့ပွုမိနျ့ အမှတျ ၁၁၇ ဖွငျ့ ပဲခူးနှငျ့ ကရငျ ပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျအခြို့တှငျ မှနျညီညှတျ ရေးပါတီ၏ မွို့နယျကျောမတီမြားကို ဖှဲ့စညျးနိုငျခဲ့ပွီး ဖွဈပါသညျ။ ပူးပေါငျးလိုကျသော မှနျညီညှတျ ရေး ပါတီသို့ မှနျအမြိုးသမီးပါတီ ဝငျရောကျပူးပေါငျးခွငျး မရှိပါ။ မှနျအမြိုးသမီးပါတီသညျ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ တှငျ မှနျပွညျနယျအတှငျး၌ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျ မဟုတျကွောငျး သိရှိရပါသညျ။ မှနျပွညျနယျတှငျ မှနျပွညျသဈပါတီ (New Mon State Party) ဟူသညျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ရှိပွီး အစိုးရ နှငျ့ NCA စာခြုပျလကျမှတျရေးထိုးထားပွီး ဖွဈပါ သညျ။
ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (Arakan National Party)သညျ ရခိုငျဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (Arakan League for Democracy) နှငျ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြား တိုးတကျရေးပါတီ (Rakine Nationalities Develo-pment Party) တို့ ၂၀၁၄ ခုနှဈတှငျ ပူးပေါငျးခဲ့ရာမှ ပျေါပေါကျလာသညျ့ ပါတီ ဖွဈသညျ။ တိုငျးရငျးသား မဟာမိတျပါတီမြားဖွဈသညျ့ UNA နှငျ့ NDF အဖှဲ့မြား သို့ ဝငျရောကျရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ သဘောထား မတိုကျဆိုငျကွသဖွငျ့ ထိုပါတီပူးပေါငျးမှုမှာ နောကျပိုငျး တှငျ ခိုငျမာခွငျး မရှိတော့ခြေ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ မလေ ၃၀-၃၁ ရကျနမြေ့ား၌ ကငျြးပပွုလုပျသော ရခိုငျ အမြိုးသားပါတီ၏ ညီလာခံတှငျ ပါတီ၏ဖှဲ့စညျးပုံ နှငျ့အညီ ဒီမိုကရစေီနညျးကြ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးသာထှနျး လှနှငျ့ အထှေ ထှအေတှငျးရေးမှူး ဦးခိုငျပွညျစိုးတို့ကို ရှေးခယျြတငျမွှောကျ ခဲ့ပွီး ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ၁၇ မွို့နယျလုံးနှငျ့ ရနျကုနျ၊ ဧရာဝတီတိုငျးတို့၌ ပါတီ ကျောမတီမြား ဖှဲ့စညျးတညျထောငျနိုငျပွီးဖွဈသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျးရှိ ရခိုငျမြိုးနှယျစုပါတီမြားမှာ ရခိုငျအမြိုးသား အငျအားစုပါတီ (Rakine National Force)၊ ရခိုငျဦးဆောငျပါတီ (Arakan Front Party)၊ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီနှငျ့ ရခိုငျဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ပါတီမြား ဖွဈပွီး အခွားမြိုးနှယျစုပါတီမြားမှာ ရနျကုနျ အခွစေိုကျ ကမနျအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ (Ka Man National Development Party) ၊ ခမီအမြိုးသား ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (Kha Me National Development Party) ၊ မွိုအမြိုးသားဒီမိုကရစေီပါတီ (Mro National Democracy Party) ၊ မွို တိုငျးရငျးသား ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (Mro National Develop-ment Party)၊ မွိုတိုငျးရငျး သားပါတီ (Mro National Party) ၊ ရခိုငျပွညျနယျ အမြိုးသားအငျအားစု (Rakine State National United Party) ၊ ဒိုငျးနကျလူမြိုးမြား တိုး တကျရေးပါတီ (Daingnet National Development Party) စသညျဖွငျ့ အခွားပါတီ ခုနဈပါတီလညျး ဖှဲ့စညျး ထူထောငျထားကွောငျး သိရှိရပါသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ တှငျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ ဖွဈသညျ့ ရခိုငျတပျတျော (Arakan Army) နှငျ့ ရခိုငျပွညျလှတျ မွောကျရေးပါတီ (ALP) တို့ ရှိပါသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ သညျ ပါတီအဖှဲ့အစညျးမြားသလောကျ ပွဿနာ ပေါငျးစုံလညျး ရှိနကွေောငျး အားလုံး သိရှိကွ ပါသညျ။ AA သညျ NCA စာခြုပျ လကျမှတျရေးထိုး ထားခွငျး မရှိသော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့တဈခု ဖွဈပွီး Arakan National Party – ALP သညျ NCA စာခြုပျလကျမှတျထိုးထားသညျ့ ဒျေါစောမွရာဇာလငျး တို့ အဖှဲ့ ဖွဈသညျ။
နိုငျငံတျော၏ အကွီးဆုံးပွညျနယျတဈခုဖွဈသော ရှမျးပွညျနယျတှငျ လကျရှိအခွအေနေ၌ ပါတီကွီး နှဈခုဖွဈသညျ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ ခြုပျပါတီ (Shan Nationalities Laegue for Democracy – SNLD) နှငျ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမို ကရကျတဈပါတီ (Shan Nationalities Democratic Party – SNDP) တို့အပွငျ အခွားတိုငျးရငျးသားပါတီ ပေါငျးမြားစှာ ဖှဲ့စညျးထားကွောငျး တှရေ့ပါသညျ။ အခါ အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (ANDP) ၊ ဓနု တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ (DNDP)၊ ဓနုအမြိုးသားမြားအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (DNOP) ၊ ရှမျး ပွညျနယျအရှပေို့ငျး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ (ESSDDP) ၊ အငျးအမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ ရေးပါတီ (INDP) ၊ ကယနျးအမြိုးသားပါတီ (KNP)၊ ကိုး ကနျ့ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ညီညှတျရေးပါတီ (KDUP)၊ လားဟူ အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (LHNDP) ၊ ပအို့ဝျအမြိုးသားအဖှဲ့ ခြုပျ (PNO) ၊ ရှမျးနီ-တိုငျးလိုငျနှငျ့ မွောကျပိုငျးရှမျးမြိုးနှယျစု မြား သှေးစညျးညီညှတျရေးပါတီ (SnNSESP) ၊ တအောငျး- ပလောငျ အမြိုးသားပါတီ (TAPNP) ၊ တိုငျးလိုငျရှမျးနီ အမြိုးသား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (TNDP) ၊ ပွညျထောငျစု ပအို့ဝျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (ပအမဖ)ပါတီ (U Oa ONO)၊ လဈဘရယျ ဒီမိုကရကျ တဈတိုးတကျဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (WLDDP) ၊ “ဝ”အမြိုး သား စညျးလုံးညီညှတျရေးပါတီ (WNUN) စသညျဖွငျ့ ၁၅ ပါတီရှိပါသညျ။
ထို့အပွငျ ရှမျးပွညျနယျအတှငျး၌ ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ငါးခုရှိသညျ။ မွို့နယျ ငါးမွို့ နယျဖွငျ့ ဖှဲ့ထားသော ‘ဝ’၊ မွို့နယျ သုံးမွို့ နယျဖွငျ့ ဖှဲ့ထားသော ‘ပအို့ဝျ’၊ မွို့နယျ နှဈမွို့နယျစီဖွငျ့ ဖှဲ့ထားသော ‘တအောငျး-ပလောငျ’၊ ‘ကိုးကနျ့’၊ ‘ဓနု’ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေမြား ဖွဈသညျ။ ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ အခွား တိုငျးရငျးသား မြိုး နှယျစုပါတီမြား နှငျ့ ရှမျးပါတီမြား ပူးပေါငျးရနျ မဆို ထားနှငျ့ ရှမျးပါတီ အခငျြးခငျြး မဟာ မိတျပွုရေးပငျ မဆောငျနိုငျသေး ကွောငျး တှရေ့ပါ သညျ။ သို့သျော ရှမျးပွညျ ညီညှတျ ရေး ကျောမတီ (Committe for Shan State Unity – CSSU) ကိုမူ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ ရှနေ့မြေားကှနျရကျ၊ ရှမျးလူငယျအဖှဲ့၊ ရှမျးပွညျ မြိုးဆကျသဈ၊ ရှမျးရှပွေ့ောငျး အလုပျသမား အဖှဲ့၊ RCSS နှငျ့ စိုငျကြော့ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့မြားဖွငျ့ ၂၀၁၃ ခုနှဈတှငျ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ခွောကျလတဈကွိမျ တှဆေုံ့၍ ရှမျးတဈပွညျလုံး စညျးလုံးညီညှတျရေးနှငျ့ တိုးတကျ ရေးတို့အတှကျ ညှိနှိုငျးတိုငျပငျကွကွောငျး သိရှိရပါ သညျ။ ထိုအဖှဲ့တှငျ SNLD ပါတီ (ချေါ) ကြားခေါငျး ပါတီ ပါဝငျခွငျးမရှိကွောငျးနှငျ့ စုပေါငျးခေါငျးဆောငျမှု အသှငျ ဆောငျရှကျကွကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
၎င်းငျးအပွငျ ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ နိုငျငံရေးပါတီ ၁၇ ပါတီအနကျ ၁၁ ပါတီပူးပေါငျးပွီး ရှမျးပွညျ တိုငျးရငျးသား ပါတီမြားအဖှဲ့ခြုပျ (League for Shan Ethnic Political Parties – LSSEPP) ကိုလညျး ဖှဲ့ စညျးထားကွောငျး သိရှိရပါသညျ။ ခှနျထှနျးဦးနှငျ့ စိုငျး အိုကျပေါငျးတို့ ရှမျးခေါငျး ဆောငျနှဈဦးက ကြား ခေါငျးပါတီအမညျဖွငျ့ ၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈတှငျ ရှေး ကောကျပှဲဝငျခဲ့ရာ အနိုငျရရှိခဲ့သျောလညျး ခှနျထှနျးဦး အဖမျးခံရသညျ့ ၁၉၉၃ ခုနှဈမှစ၍ ကြားခေါငျး ပါတီ လှုပျရှားမှု လြော့နညျးလာသညျ။ ယငျးနောကျ ၂၀၁၀ တှငျ စိုငျးအိုကျပေါငျးမှ SNDP (ချေါ) ကြားဖွူပါတီကို ဖှဲ့ စညျးပွီး ရှေးကောကျပှဲဝငျခြိနျ၌ ခှနျထှနျးဦးတို့၏ ကြားခေါငျး ပါတီ ရှေးကောကျပှဲမဝငျပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲတှငျမှ ကြားခေါငျးပါတီ ရှေးကောကျ ပှဲပွနျဝငျကွောငျး လလေ့ာ သိရှိရပါသညျ။ ဆိုရပါလြှငျ ရှမျးပွညျနယျနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျရှိ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး ပေါငျးစုံတို့၏ နိုငျငံရေးအခွအေနတှေငျလညျး လှနျစှာ ရှုပျထှေး အကဲဆတျလှကွောငျး ဖျောပွလိုပါသညျ။
ပွညျနယျအသီးသီးရှိ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံရေး ပါတီမြား။ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျး မြားအကွောငျးရေးသားဖျောပွရာ၌ ရှနေ့ောကျမညီ ညှတျမှုမြား၊ အခြိနျကာလလှဲမှားနသေညျမြား ရှိနေ နိုငျသညျဖွဈ၍ နားလညျပေးကွပါရနျ မတ်ေတာရပျ ခံလိုပါသညျ။ စငျစဈ တိုငျးရငျးသားမြားသညျလညျး သညျမွထေဲမှ မှေး၊ သညျမွထေဲမှာသာ နသေူမြားဖွဈ၍ တိုငျးပွညျအုပျခြုပျ မငျးလုပျလိုစိတျရှိကွမညျမှာ ဧကနျ မလှဲပငျ ဖွဈပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ့ အတိုငျး အကှဲကှဲအပွားပွား အမြိုးမြိုးသောပါတီမြား၊ လကျ နကျကိုငျမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးတညျထောငျထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့အစညျးမြား၏ လားရာကို မညျသို့ မြှ ရှုမွငျသုံးသပျခကျြမပေးနိုငျပါ။
လှတျလပျရေးရပွီးစ ၁၉၄၈ တှငျ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီမြား မပျေါပေါကျခဲ့။ ဖဆပလ၊ ပထစ၊ ပမညတ၊ တညျမွဲ-သနျ့ရှငျး စသညျ့ ဗမာပါတီမြားသာ ပျေါပေါကျခဲ့သညျ။ ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၆ ခုနှဈမြားတှငျ ကငျြးပသော ရှေးကောကျပှဲမြား၌ မညျသညျ့တိုငျးရငျး သား နိုငျငံရေးပါတီကမြှ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခွငျး မရှိ၊ ဖှဲ့စညျးနိုငျခွငျးလညျး မရှိခဲ့၊ မွနျမာ့ဆိုရှယျလဈ လမျးစဉျ၏ တဈပါတီအာဏာရှငျ ခတျေတှငျ ဘယျ တိုငျးရငျးသားကမြှ ပါတီထောငျရနျ မစဉျးစားဝံ့ကွ၊ ၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈတှငျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စောမောငျ ကငျြးပပေးခဲ့သော ရှေးကောကျပှဲ၌ တိုငျးရငျးသားပါတီ အနညျးငယျငယျသာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနိုငျပွီး အောငျမွငျမှု လောကျလောကျလားလား မရှိခဲ့ပါ။
၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပသောအခါ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားစှာ ထူထောငျလာကွသညျ။ ရှေးကောကျပှဲဝငျသညျ၊ မြားမြားစားစား မနိုငျ၊ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အခွအေနပေို၍ဆိုးသညျ။ သောငျပွိုကမျးပွို ရှုံး ကွသညျ။ ထိုတော့မှ တိုငျးရငျးသားမြား ကှဲပွဲ၍ မရ ကွောငျး၊ မသငျ့ကွောငျး၊ ကှကျကှကျကှငျးကှငျး သိမွငျ လာကွသညျ။ အထကျတှငျဖျောပွခဲ့သညျ့အတိုငျး ပေါငျးစညျးရနျ ကွိုးစားကွသညျ။ သို့သျော ရာနှုနျးပွညျ့ မအောငျမွငျ၊ တဈပါတီကနျြ နှဈပါတီကနျြ ဖွဈနေ သညျ။ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား ကလညျး UNFC ဖှဲ့လိုကျ၊ ပွနျခှာလိုကျ PPST မှ PPCM လိုလို၊ NCA ထိုးသူထိုး၊ မထိုးသူမထိုး၊ အမြိုး မြိုးအဖုံဖုံ သဘောထားခငျြး မဆုံ မညီကွလြှငျ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျကို မညျသို့လှမျးကိုငျကွမညျနညျး။ UNA နှငျ့ NBF ချေါ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေး ပါတီ မြားအစုအဖှဲ့ နှဈဖှဲ့မှနပွေီး တဈဖှဲ့တညျးထား၍ မရ နိုငျသလော။ ယခု ပွညျနယျခုနဈခုအနကျ ပွညျနယျ ငါးခု တှငျ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံရေးပါတီမြား ပူးပေါငျး လာကွသညျ။ ထိုပူးပေါငျးပါတီမြားနှငျ့ UNA/NBF တဈသံတညျးထှကျပွီး တိုငျးရငျးသားအရေးကို ဆောငျ ရှကျပေးကွလြှငျ မကောငျးလသေလော…..။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ တိုငျးရငျးသားနိုငျငံ ရေးပါတီ မြား မညျသို့စဉျးစားကွမညျနညျး။ ၂၀၂၀ အလှနျထှကျပျေါ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျအပျေါ မညျသို့ကွိုတငျဉာဏျ ဆငျကွမညျနညျး။ တိုငျးရငျးသား တို့၏ အခှငျ့အရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားမြား မညျ သညျ့ဘကျသို့ ရှလြေ့ားသငျ့နညျး…. တိုငျးရငျးသားမြား ကိုယျတိုငျသာ တှဆေုံ့ညှိနှိုငျး အဆုံးအဖွတျပေး အဖွေ ရှာရတော့မညျသာ ဖွဈပါသညျ။